Goobtii ay ka dhici laheed Doorashada Madaxweynaha oo Isbadal lagu sameeyay iyo Sababta oo la shaaciyay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Goobtii ay ka dhici laheed Doorashada Madaxweynaha oo Isbadal lagu sameeyay iyo Sababta oo la shaaciyay!!
Goobtii ay ka dhici laheed Doorashada Madaxweynaha oo Isbadal lagu sameeyay iyo Sababta oo la shaaciyay!!
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in xarunta Iskool Buluusiya ee horey loo qorsheeyay in ay ka dhacdo doorashada Madaxweynaha laga wareejiyay laguna qabanayo doorashada xarun kale oo cusub.
Inta badan Musharaxiinta u taagan xilka Madxaweynaha Soomaalkiya ayaa warqad u qoray Guddiga doorashada Madaxweynaha waxa ayna kaga dalbadeen in xarunta Iskool Buluusiya laga soo wareejiyo doorashada Madaxweeynaha.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Beyle Ducaale, ayaa Warbaahinta u sheegay in Guddiga Qaban qaabada Doorashada iyo Gudoonka Labada Aqal isla garteen in doorashada Madaxweynaha ay ka dhacdo xarrunta Afisyooni ee Muqdisho.
Dr Beyle ayaa tilmaamay in 18-kamid ah Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya in ay codsadeen in doorashada laga wareejiyo Iskool Buluusiya laguna qabto xarunta Afesiyooni ee ku dhaw garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
Musharaxiinta kasoo horjeestay in doorashada lagu qabto Xarunta Iskool Buluusiya ayaa ka cabsi ka qabay sida ay sheegeen Musuq maasuq iyo xaalado dhinaca Amniga, waxa ayna halkaasi ka doorbideen xarunta Afesiyooni.
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay dhacdo 8-da bishan Febraayo, waxaana magaalada ka socda diyaar garowga Doorashada , shacabka Soomaaliyeed ayana u dhag taagaya Doorashada sanadkan oo ah mid xiiso gaar ah leh
Previous PostAkhriso:- Qudbadda Madaxwene Musharax Cabdullaahi M/ Farmaajo uu manta jeediyay!! Next PostDaawo : Dawlada Soomaaliya oo sheegtay inay Itoobiya Xidhatay oo ay leexsatay Biyaha Webiga Shabeele!!